Injeniera Peroviana notolorana ny loka iraisam-pirenena tamin’ny hevitry ny galety miady amin’ny tsy fahampian-drà · Global Voices teny Malagasy
Mampihena ny anemia ao amin'ny ankizy ao anatin'ny 30 andro ilay galety
Voadika ny 27 Febroary 2020 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, 日本語, Français, عربي, Español
Sary nataon'ny Global Voices mampiseho an'i Julio Garay sy ny galety Nutri H. Nalaina tao amin'ny Peru's National Superintendence of Customs and Tax Administration sy ny Mercadolibre.com.pe.
Tamin'ny 29 Janoary 2020, nanambara ny talen'ny fantsona fahitalavitra History ao Etazonia fa ilay injenieran'ny agroindostrialy Peroviana Julio Garay Barrios, avy any amin'ny faritra Ayacucho no mpandresy tamin'ny fifaninanana nokarakarain'izy ireo mitondra ny lohateny hoe “Hevitra hanovana Tantara” . Ny « Nutri H cookies » (mofomamy boribory nofisahana Nutri H nohafohezina hoe galety Nutri H) no hevitra nahazoany ny fandresena:
[…] Galety be otrikaina tian'ny ankizy izy io, mora entina sy tahirizina ary hohanina avy hatrany. Manan-karena proteina sy vy hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra (anemia) sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny zaza ny singa ao aminy.
Araka ny fitsapana natao tany Però, mitombo ny tahan'ny hemoglobina ao anatin'ny ràn'ny zaza telo ka hatramin'ny enina taona izay mihinana ity galety ity isan'andro mandritra ny 30 andro.
Aely amin'ny alalan'ireo foibe mpaninjara nahazo alalana manerana an'i Però ny fivarotana ny galety Nutri H. Tafiditra amin'ny fanentanana ataon'ny fiadidiana monisipaly sy isam-paritra ihany koa izany amin'ny fiadiana ny aretina anemia mpahazo ny ankizy.
Efa ho antsasaky ny ankizy Peroviana no tsy ampy ra
Saika ny 50 isanjaton'ny ankizy ao Però no mijaly noho ny aretina anemia ao amin'ity firenena fantatra amin'ny nahandrony ity.
Matetika mipoitra avy amin'ny tsy fahampian'ny vy sy ny vitamina no mahatonga ny anemia ary misy voka-dratsiny lehibe ho an'ny ankizy. Miteraka tsy fahombiazana amin'ny fianarana izany satria mora reraka ny ankizy voan'ny anemia ary manana fahasarotana amin'ny fifantohana any an-dakilasy. Mihena ihany koa ny fivoarana ara-psikomotera ary mihamalefaka ny hery fiarovana izay midika fa mora azon'ny otrikaretina kokoa izy ireo.
Nidina ho 41,1 isan-jato raha 46,1 isan-jato ny isan'ireo ankizy voan'ny anemia any Però nanomboka ny taona 2018 ka hatramin'ny 2019, araka ny angondrakitra novokarin'ny Ivontoerana Nasionaly misahana ny Antontanisa sy ny Informatika ao an-toerana. Noho ny fanentanana fisorohana nataon'ny governemanta no nahatonga izany somary fihenana kely izany araka ny filazan'ny manam-pahaizana.
Araka ny fanamarihan'i Julio Garay, misy singa fototra miisa telo ny galety Nutri H : quinoa, kakao, ary hemoglobina avy amin'ny omby, izay tena mitondra ny vy betsaka indrindra. Efa nijaly tamin'ny anemia i Garay fony izy mbola kely ary io no nanosika azy hitady vahaolana.
Tao amin'ny Twitter, nankalaza ny fandreseny ny kaontin'ny galety Nutri H:
LOKA VOALOHANY ??
????Eny, azonay izany! ???
Misaotra an'ireo olona rehetra izay nanohana sy natoky ahy, ho anareo rehetra ity fahombiazana ity, misaotra anao ihany koa ry Pero malalako.
Niarahaba an'i Julio Garay noho ny zava-bitany ny andrim-panjakana sy ny olom-pirenena Peroviana:
Miarahaba ny mpamorona ny galety Nutri H izay miady amin'ny anemia isika, hetsika izay manatsara ny fahasalamana izy io, indrindra ny fahasalaman'ny ankizy, ireo izay mila izany indrindra.
? ?Julio Garay, mpandresy tamin'ny fifaninanana nataon'ny fantsom-pahitalavitra Amerika Latina History .
Fitaratra amin'ny fihariana sy asa!
Mendrika ny ho tantaraina bebe kokoa izany…